Goobaha Khadka Tooska ah ee Serbian - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ...Xilligan, khamaarka Serbia si adag ayaa loo xakameeyaa. Wixii ka dambeeyay dagaalladii Yugoslavia ee waddanka waxaa ka buuxsamay casinos aan shatiyeysnayn oo ka shaqeeya suuqa madow. Isku dayga lagu xakameynayo aaggan ugu dambeyn laguma guuleysan. In 2011, waxaa jiray mid ka mid ah sharciyada ugu adag ee khamaarka taariikhda dalka oo mamnuucaya gelitaanka goobaha khamaarka ee ajnebiga ah.
Laga bilaabo Janaayo 2017 khamaarka sharciga ah ee dalka sida bingo iyo bingo, sharadka isboortiga, ciyaaraha casino, turub iyo khamaarka internetka. Qaanuunka Serbia khamaarka wuxuu leeyahay hal muuqaal oo ah taas, oo aan ka duwaneyn canshuurta oo ah xaddiga 15% ee la bixin karo marka ay ciyaartoydu ku guuleystaan ​​khamaarista isboortiga si ay uga guuleystaan ​​cashuurta kaararka ama mashiinnada mashiinnada aan laga qaadi doonin.
Kahor intaan la ansixin sharciga khamaarka khadka tooska ah ee Serbia, aaggan lagama xukumo dalka. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii la ansixiyay sharcigan, khamaarka internetka ayaa noqday mid xadidan. In ka badan 70 bog oo ay leeyihiin shirkado shisheeye ayaa la xanibay. Hadda dhammaan shirkadaha doonaya inay adeegyadooda u fidiyaan ciyaartooyda reer Serbia waa inay shati haystaan ​​oo ay ku saleysan yihiin waddanka. Joojinta goobaha khamaarka ee khadka tooska ah ee ajnebiga ah waxaa lagu dheelitiray abuuritaanka goobo maxalli ah. Si kastaba ha noqotee, soo jeedinta ay bixiyaan, weli way xadidan tahay.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Serbia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu fiican, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Serbia
Masuuliyiinta Serbia waxay go’aansadeen inay gabi ahaanba la wareegaan gacan ku haynta suuqa ciyaarta, oo lagu baahiyo internetka. Tani waxay ka caawin doontaa dowladda dalka inay nidaamiso qulqulka lacagaha badan ee muwaadiniinta walaalahood ah. Yurub dhexdeeda, mawduuca sharciyeynta khamaarka ee internetka ayaa aad caan u ah sannadihii la soo dhaafay. Wadamo badan oo ka mid ah Dunida Hore ayaa horey u qaaday talaabooyin la mid ah, wadamada kale ee Yurub ayaa diyaarinaya aasaaska sharciga cusub. Arrin xiiso leh, geeddi-socodka sharciyeynta ee casinos-ka khadka tooska ah ee Midowga Yurub waxaa lagu qabtaa habka caadiga ah. Marka ugu horeysa, sida in meel kasta oo ay ka shaqeeyaan shirkadaha maxalliga ah ay jiraan dhibaatooyin kala duwan, mararka qaarna aan laga gudbi karin. Kadibna masuuliyiintu waxay bilaabayaan inay kala xaajoodaan bixiyeyaasha ciyaaraha qadka tooska ah, iyagoo durba qeexaya xaaladahooda Midka ugu dambeeya waxba uma hadhin in la sameeyo mooyee laakiin in la qaato qawaaniinta dadka kale.
Si la mid ah arrinta iyo Dowladda Serbia, ku guuleysiga xayiraadda howlaha ka socda dhulkeeda in ka badan toddobaatan hawlwadeennada shisheeye ee khadka tooska ah ka shaqeeya, iyadoo laga tegayo bakhtiyaanasiibka gobolka. Taas ka dib, masuuliyiinta Serbia waxay abuureen gudi gaar ah, oo ay tahay inay tixgeliyaan dhammaan niyadaha macaamilka mustaqbalka.
Isla mar ahaantaana, dakhliyada dadka ka shaqeeya khamaarka Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa sii dhacaya. Wadamadan 2012 si buuxda ayaa loo sharciyeeyay casino online, hadda iyaga waxaa lagu ciyaari karaa dhammaantood sharci iyo ammaan. Si kastaba ha noqotee, tilmaamayaasha sida canshuuraha dakhliga ee Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa si xoogan u kordhay, sidaa darteed casinos waxay bilaabeen inay dadka isticmaala siiyaan shuruudo aan ka wanaagsaneyn. Iyadoo la raacayo, taraafikada ayaa si aad ah hoos ugu dhacday, dakhliyada warshadaha khamaarka ee internetka sidoo kale waxay bilaabeen inay dhacaan. Sidaa darteed, sababta koowaad ee fashilka sharciga cusub maahan dhibaato dhaqaale iyo xaalado aan fiicneyn oo looga shaqeynayo hawlwadeennada maxalliga ah ee internetka.
Khamaarka Serbia wuxuu bilaabay inuu si firfircoon u horumaro kaliya dhawaan, markii dowlada 2011 ay meel marisay dhowr sharci oo lagama maarmaan u ah khamaarka. Ilaa waqtigaas, dhowr hay'adood oo sharci darro ah ayaa ka hawlgalay waddan yar oo Balkan ah. Kadib ansixinta sharciga cusub ee lagama maarmaanka u ah kaqeybgalka ganacsiga khamaarka ee Serbia waxay suurto gashay kadib markii la helay liisanka ku habboon. Nidaaminta khamaarka ganacsiga khamaarka ee Serbia wuxuu bilaabay inuu si firfircoon u horumariyo. Maanta, casinos-ka iyo guryaha khamaarka waxay ku faani karaan tiro badan oo soo booqda fiidkii waana wax madhan xitaa maalinta. Howlaha noocan ah gobolka hadda wuxuu soo saaraa rukhsad badan. Kasiinooyinka Serbian-ka waxay maalgashigooda geliyeen maalqabeenno badan iyo milyaneerro caan ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in dawladda gobolka Balkan ay u oggolaatay hawlwadeennada ajnabiga ah inay waddanka ku soo bandhigaan khamaar, haddana dagaal firfircoon oo ka dhan ah khamaarka sharci darrada ah ayaa wali socda. Tani waa horumarka ugu weyn ee taban ee warshadaha khamaarka ee Serbia. Ganacsiga Ciyaaraha Serbia maanta waxaa ka socda isbedelo waaweyn oo saameyn ku leh horumarka guud ee dhaqaalaha gobolka. Dhawaanahan, dowladdu waxay bilowday olole ballaaran oo lagu ciribtirayo bixiyeyaasha sharci darrada ah ee casinos-ka internetka. Cunista shirkado badan ayaa la mamnuucay. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyiintu waxay rumeysan yihiin in tallaabooyinkani ay gacan ka geysan doonaan sidii loo gaari lahaa heer cusub oo ku saabsan warshadaha ciyaaraha. Warshadaha khamaarka si tartiib tartiib ah ayey caan uga yihiin dalka firfircoon.
Kasiinada ugu caansan uguna raaxada badan waa makhaayada Grand Casino Belgrad, oo ku taal Belgrade. Booqdayaasha leh qalab badan oo qolal ah oo la jaan qaadi kara mashiinada ugu caansan, miisaska elektarooniga ah iyo miisaska lagu ciyaaro noocyada kala duwan ee turubka. Dadka VIP-da ah ee ku jira machadku waa qol gaar ah, oo saamiyada ay si gaar ah ugu sarreeyaan. Casino Tani waxay leedahay shan iyo labaatan miis ciyaaraha. Marka la barbardhigo hay'adaha Montenegrin, casino wuxuu leeyahay hudheel oo kaliya diirada ma saarin khamaarka. Khamaaristu waxay ka mid tahay dadka deegaanka ee xiisaha gaarka ah leh. Naadiyo badan oo khamaar ayaa bixiya booqdayaasha gaminator caan ah, Blackjack, craps, roulette, iyo noocyo badan oo turub ah. Laakiin weli horumarka casriga ah ee ganacsiga khamaarka ee waddanka ayaa loogu talagalay soo jiidashada maalgashadayaasha shisheeye iyo dalxiisayaasha shisheeye.
Maanta, waddankan Balkan Peninsula, Serbia caan kuma ahan shisheeyaha. Danta guud waxay diiradda saareysaa ku qanacsanaanta waxqabadka bulshada iyo tixgelin la'aan khamaarka. Gobolku wali wuxuu isku dayayaa inuu si adag u xakameeyo goobaha khamaarka. Warshadaha khamaarka ee dalka wali wuxuu kujiraa bilowgii shaqadiisa. Si kastaba ha noqotee, dawladda gobolku waxay xiiseyneysaa xallinta dhibaatooyinka badan ee khamaarka. Maaddaama ganacsiga khamaarka ee waddanka uu ku jiro marxalad horumarineed iyo in lagu daro Serbia oo laga heli karo casinos online ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaatooyin badan. Ururka Ganacsiga ee Seerbiya ayaa muddo sanad ah xannibaya marin u helidda hawlwadeenno shisheeye. Isla waqtigaas xubnaha ururka waxay sameeyeen falanqeyn ku saabsan macluumaadka ku saabsan suuqa khamaarka ee jasiiradda Balkan iyo, gaar ahaan, Serbia. Sababtoo ah sharci u gaar ah oo ku saabsan khamaarka illaa dhowaan uusan ka jirin dalka, Gobolku si xoog leh ayuu u dhibtooday oo wuxuu u sii wadaa inuu ku dhaco falalka sharci darrada ah ee casinos iyo casinos online. Sharciga cusubi wuxuu wali suurta galiyay in ciyaartoydu ay si xor ah ugu ciyaaraan casino tooska ah xitaa iyadoon diiwaangalin. Wadayaasha casinos waxay taxaan canshuuraha lagama maarmaanka u ah khasnadda dowladda. Sharciga cusub ee khamaarka ayaa si buuxda loogu oggolaaday inuu sameeyo hal saldhig oo cashuur isla markaana isla markiiba la socdo howlaha socda - macaamillada u dhexeeya wadayaasha iyo inta u dhexeysa ciyaartoyda. Maanta, himilada ugu weyn ee khamaarka Serbia waa gebi ahaanba dhexdhexaadnimada khamaarka sharci darrada ah, labadaba waddanka iyo internetka. Dabcan, Serbia waa inay si dhakhso leh u gaarto heerka dalalka kale ee Balkan ee ku jira warshadaha ciyaaraha.